के यो पोल्यान्डको पि आर सहि हो त ? | "हरेक घरमा धारो होस्, हरेक गाउँमा सिंचाइ होस्"
के यो पोल्यान्डको पि आर सहि हो त ?
March 20, 2018 by POLAND NEPAL
चोरहरु जतिसुकै बुद्दी लगाए पनि केहि न केहि छुटाउछन् । यो पोल्यान्डको बसाई अनुमति कार्ड हो । यो कार्ड हेर्दा दुरुस्तै छ । नियालेर नहेर्ने र सतही रुपमा हेर्ने हो भने पोल्यान्डकै प्रहरी पनि यसो कार्ड हेरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई छोडिदिन सक्छ किन कि सबै दुरुस्त छ । मेसिनमा चेक नगर्दा सम्म कार्ड सक्कली नक्कली थाहा न हुन सक्छ ।
यस्तो किसिमको कार्ड सरासर झुटो र नक्कली कार्ड हो । किनकी
पोल्यान्डको यस्तो किसिमको स्थायी अनुमती कार्डको म्याद १० वर्षको हुन्छ अझ तर यहाँ तीन वर्षको बनाइदिएर चोर चुकेको छ कि त इमिग्रेसन चुकेको छ । पोल्यान्ड कार्डमा इन्डियालाई Indie लेखेको हुन्छ India लेखेको हुँदैन । यस्तो किसिमको कार्ड कसैले पाउनु भएको छ भने सिधै इमिग्रेसन गएर चेक गर्न लगाउनुहोस । तर तपाईहरु पिडितहरु आफै मौन बस्नुहुन्छ भने तपाइको मौनताले अरु सयौ पिडित हुन्छन् । तपाइ पिडितहरु पनि नौटन्की नक्कली कागजको लोभमा चुप बसिदिने लुकेर काम गरेको छु मलाई के बाल मतलब भनिदिने अवस्थाले अरुले दु:खद अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।आज इन्डियाको व्यक्तिले यो कार्ड पाएको होला भोली नेपालकोले पाउन के ठूलो भो र ? हेर्दा हेर्दै तपाइको घर आगनले पनि लुटिन के बेर भो र ? जुन दिन सम्म पिडितहरु गलत कामको बिरुद्धमा आवाज उठाउदैन त्यो दिन सम्म घटनाहरु छिप्पिएर पुरै देश समाज ध्वस्त हुनेछ । रास्टृयता खोक्रो नक्कली कागजमा डुब्नेछ ।
यो कार्डमा अरु पनि चुकेको छ । त्यो तपाइहरु पनि छुट्ट्याउनुस । यस्तै गलत नक्कली कार्ड बनाएर कोहि मख्ख पर्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हो । बरु नक्कली कार्ड बनाएर कसैले करोडौ ठगेको हुन सक्छ । पि आर भन्ने कुरो तपाइको पोल्यान्ड आएको ६ महिनामै हुँदैन ।हुँदैन हुँदैन ।
← इन्टरनेसनल पोलिश फूटबल लिगमा एन आर एन पोल्यान्डको तर्फबाट फूटबल नेपाली टिम सहभागी ।
पोल्यान्डमा एक जना नेपाली महिलाको मृत्‍यु भएको खबर प्राप्त →